एघार बर्षे केटालाई चिकाएको कथा
त्यतिबेला मेरो उमेर त्यस्तै १६ बर्ष भएको थियो होला। घरमा म एक्ली छोरी हुनाले घरको रेखदेख सबै म नै गर्थे। म बिहान पढ्न जान्थेँ बाँकि दिनभरि नै घरमा हुन्थेँ। ममि ड्याडि दिनमा सरकारी आफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो घरको काममा सहयोग गर्न गाउँबाट एक बर्ष पहिले बाबाले दश बर्षको एकजना केटा ल्याउनुभएको थियो। केटाको उमेर सानोनै भएपनि उसको जिउ डाल सप्रिसकेको थियो। ऊ दिउसो स्कुल जान्थ्यो । हाम्रो भेट प्रायः बेलुकानै हुन्थ्यो । उसले मलाई दिदी भनेर बोलाउथ्यो र मसँग बिना हिचकिचहट बोलचाल पनि गरिरहन्थ्यो। उसको बानि व्यवहार बच्चा जस्तो नै थियो। जेठ महिनाको १ दिनको कुरा हो, म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकी थिएँ । दिउँसोको त्यस्तै साँढे बाह्र बजेको हुँदा हो, बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसि नसक्नु भएको थियो । मेरो कोठामा त झन् माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेलाझैं भएको । त्यो उत्पात गर्मीमा म किताब खोलेर त बसेकी थिएँ तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन । बैशाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुँ कि पोईला जाउँ जस्तो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएँ । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएँ । एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोम रोम रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म एउटा हातले म्याक्सी माथीबाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकी थिएँ । मलाई आफैंले छाती खेलाउँदा थोरै दुख्ने गरेर स्तनको मुण्टो निचार्यो भने निर्वाचनका निकै आनन्द लाग्थ्यो। त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्तनको मुण्टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको ।
म उत्तानो परेर बिछ्यौनामा मडारिरहेकी थिएँ । मडारिने क्रममा तलबाट म्याक्सी सुर्किएर पेटसम्म आएको थियो । म अर्को हातले भने बाक्लिएर कालो हुँदै गएका रहर लाग्दा योनि क्षेत्रका रौंहरु मुसार्दै थिएँ । वाताबरणमा भएको गर्मी र मेरो रंगीन कल्पनाले उमारेको जोसको सम्मिश्रणले गर्दा मलाई मेरो योनि भित्रबाट ज्वालामुखी विष्फोटन भएर लाभाहरु छरिन्छ कि जस्तै लाग्दै थियो । विष्फोटनकै संकेत स्वरुप मेरो योनिको मुख भागबाट निस्किएको चिल्लो चिप्लो पदार्थ मेरो हातले स्पर्स गर्दै थियो । त्यतिकैमा ढोका बाहिरबाट त्यो केटा दिदी भन्दै बोलाउन थाल्यो। म थोरै सम्हालिएर बाहिर निक्लेर सोधेँ – “किन आज १२ बजे नै स्कुलबाट फर्केको?” उसले आज स्कुलमा हड्ताल भएर चाडैनै आउनु परेको कुरा सुनायो। मेरो जवानिको जोस अझ नि कम भएको थिएन । त्यो केटालाई भित्र लगेर फटाफट आफूसंग चिकाई हालूँ जस्तो लाग्दै थियो। तर फेरि केटालाई थाहा छ कि छैन अनि फेरि के भन्ने हो भनेर मैले तुरुन्त मुख फोरेर त्यो कुराको बारेमा केही भन्न सकिन। मैले उसलाई भनेँ – “जा फ्रेस भयेर आइज संगै फिल्म हेर्नुपर्छ।” ऊ ५ मिनेट मै नुहाएर आयो। हाल्फ पाईन्ट र टिसर्ट लगाएर आएको रहेछ।
हामि दुबै ओछ्यानमा पल्टेउँ। मैले ल्यापटप खोलेर सिधै ब्लु फिल्म लगाएँ र सोधेँ – कहिल्यै यस्तो गरेको छौ कि नाईँ ? उसले सरम मान्दै “नाई” भन्दै खुब मजाले हेर्न थाल्यो। ब्लु फिल्ममा पुति चाटेको लाडो चुसेको अनि बिस्तारै चिक्न थालेको सिन हेर्दाहेर्दा मैले खप्न नै सकिन। मैले फिल्म नै बन्द गर्दै उसलाई जिस्काउँदै भनेँ तलाई पनि यस्तो गर्न मन ला’छ ? उसले सर्माउँदै लाछैन भनेर बाहिर निस्कन खोज्यो। मैले उसलाई च्याप्प समातेर अब दिदीसँग यस्तो नगरिकन जान पाउँदैनस् भनेपछि उसले नाई भन्दै थियो तर मैले जबर्जस्ती उसको हाल्फ पाईन्ट खोलेर सुताउदै उसको सानो भाई खेलाउन थालेँ। उसलाई पहिला त काउकुति लागेको रहेछ केहीछिन बिस्तारै खेलाइदिएपछि उसले मजा मान्न थाले जस्तो गर्यो। एकैछिनमा उसको सानो तुरि पनि ठन्केर ७ इन्च जति लामो भयो। उसको लाडोको टुप्पोको छाला पनि फर्केको रहेनछ मैले बिस्तारै फर्काई दिएँ। उसलाई अलिअलि दुख्दै रहेछ। मैले केहि हुँदैन भनेर उसको लाडो चुस्न थालेँ। उ अझ उफ्रिन थाल्यो। मैले निकैबेर चुसेपछि उसलाई सबै कुराको मजा आउन थालेको थियो भने मलाई खपि नसक्नु भएको थियो। अब तेरो पालि भनेर म मेरो प्यन्टि फुकाल्दै उसको टाउको समातेर मेरो पुति तिर लगाउन थाले। उसले के गर्ने भन्दै थियो मैले फिल्ममा जस्तै गरेर चाट न भनेँ। ऊ पहिला त घिन माने जस्तै गरि चट्दै थियो तर पछि त मजाले ल्याप ल्याप चाट्न थाल्यो। केहि बेर चाटेपछि मैले फेरी उसको लाडो चुस्न थाले र मेरो दुध माड्न लगाएँ ।
यो कर्म केहिबेर चलेपछि मैले नै उसलाई चिक्न भनेँ। उसको लाडो डन्डा जस्तो खडा भएको थियो। उ म माथि चढ्यो। उसले आफै मेरो पुतिमा लाडो घुसाउन सकेनँ। कहिले दाँया, कहिले बायाँ, कहिले यता, कहिले उता उसको लाडो चिप्लिरह्यो। आखिरमा मैले नै एक हातले उसको लाडो समातेँ र अर्को हातले पुतिको मुख फैलाएँ अनि पुतिको मुखमा लाडो राखेँ। अनि उसलाई बल गरेर धकल्न लगाएँ। उसले पनि बल लगाएर धक्का दियो। बल्ल पुतिमा लाडो ल्वाम्मै पस्यो। मलाई खुब् मजा आयो। सुरुमा त उसले लाडो पुति भित्रनै रखिरह्यो। एकदुई मिनेटपछि मैले आगडी पछाडी गर्न लगाएँ । उसले लाडोको टुप्पोमा धेरै काउकुति लागेको र तातो भएको कुरा गर्दै थियो। मैले जे भएपनि आफैले तलबाट पुतिभित्र लाडो कोचाउन तल माथि गर्दै थिएँ। चिप्लो पानी आइरहेको मेरो पुतिमा केटाको लाडो घुसाउँदा प्लाट… प्लाट… प्लिच… प्लिच आवज आइरहेको थियो। मलाई स्वर्गीय आनन्द मिलिरहेको थियो। करिब आधा घन्टा लगातार चिकेपछि मेरो फुसी झर्यो तर केटाको भने झरिनँ। मलाई त्यो बखत चिक्न पुगेकोले उसको लाडो मेरो पुतिबाट झिकिदिएँ तर बिचराको लाडो एक्दम ठन्केको ठन्केइ थियो। मैले उसको लाडो केहि बेर चुसेँ तर पनि केहि झरेन। उसले भन्दै थियो कि उसको लाडो फुट्ला जस्तो रन्केको छ। मलाई लाग्यो यो केटाले आजसम्म आफ्नो माल झारेको रैनछ। एक पटक पनि फुसी नझरेको वा एक चोटी पनि नछोलेको केटाहरुको लाडो खालि ठन्केको ठन्कै गर्ने रहेछ। मलाई समस्या पर्यो अब यसको लाडो कसरी सुताउने भनेर । मैले आइडिया निकाले उसलाई चिसो पानिले नुहाईदिएँ । बल्ल उसको लाडो थन्कन छोड्यो। बिचरालाई लाडोबाट फुसि झार्ने तरिका पनि थाहा रहेनछ। मैले पनि ब्लु फिल्ममा खालि चिकेको मात्रै देखाएकि थिएँ तर फुसी झारेको देखाएकी थिईन। त्यो दिन मैले दुई चोटीसम्म उसलाई चिकाएँ तर पनि उसको फुसि झर्दै झरेन। त्यस्तै ३-४ दिनसम्म मैले त्यो केटालाई चिकाएँ आफुलाई नपुगुन्जेल। कहिले काहीँ त एक घण्टासम्म पनि चिके होला तर केटाको लाडो ठाडो को ठाडो नै भै रहन्थ्यो। चिसो पनिले धोएपछि मात्रै उसको लाडो सानो हुन्थ्यो। मैले १ दिन उसलाई मैले पुरा ब्लु फिल्म देखाइदिएँ। उसले फिल्ममा चिकिसकेपछि लाडोबाट फुसिको पिच्करी निस्केको पनि देख्यो। अब भने माल झार्न सिक्ला जस्तो लागेर मैले भने यस्तो माल आउन लाग्यो भने पुतिबाट लाडो झिकि हल्नुपर्छ है भनेँ। उसले हुन्छ भन्दै ल्वाम ल्वाम चिक्न थाल्यो तर त्यो दिन पनि तर उसले माल झार्न सकेन। हामि दिनमा ३-४ चोटि चिक्दा पनि उसको माल झर्न सकेको थिएन। यसमा उसलाई धेरै पिडा भएको थियो भने मलाई धेरै मजा। किनकि उसको लाँडो जती बेला पनि सार्हो नै हुन्थ्यो तर मलाई साह्रो लाडो पुतिमा घुसाउन पाए खुब मजा आउँथ्यो। १५ दिन पछिको कुरा हो त्यो दिन हामिले दोश्रो पटक चिक्दै थियौँ। केटो पनि चिक्न यक्सपर्ट भएको थियो। उसले मेरो सहयोग बिनै खुब मजाले धित मरुन्जेल ल्वाम कि ल्वाम गरेर चिक्दै थियौँ। उसले आँखा झुलाउँदै आह्ह… आह्ह… आह्ह… भन्दै लाडो पुतिबाट झिकेर हल्लाउन थाल्यो। ओहो उसको लाडोबाट पहिलो पटक तीन चार थोपा सेतो फुसी झर्यो । पहिलो पटकको उसको भर्जिन फुसि मेरो पुतिको मुखभरी लतपतियो। मस्त बस्नादार फुसिसंगै मैले उसको लाडो पनि चुसिदिएँ। बल्ल उसको लाडो आफै सिथिल भयो।
एघार बर्षे केटालाई चिकाएको कथा 2016-08-25T17:19:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Bikas Gurung
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: एघार बर्षे केटालाई चिकाएको कथा